admin | Dayniile.com
BREAKING NEWS: Madaxeyne Farmaajo hal taako oo ka mid ah in dhulka Soomaliya in qaato yeeli meyno intay naf nagu jirto Aqriso
Jun. 19 WARKA MAANTA no comments
• HASHIISKA AFARTA DEKADOOD “Wax dekad ah oo la siiyay ama la siin doono Itoobiya ma jirto. Wadankeena wuxuu u baahan yahay dhaqaale, anagana dhaqaalaha ma heysano” “Afarta Dekadood kaliya waxaan u raadineeynaa waa in lagu sameeyo dayactir iyo maalgashi. Itoobiya waxey qeyb ka yihiin wadamada maalgashiga ku sameynaayo. Waa in sidaas loo fahmo” •• […]
Maxkamada Jubbaland Oo Xukuntay Askari Dilay Xaaskiisa
Maxkamada Ciidamada Qalabka sida ee Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa waxaa Maanta ay xukun dil toogasho ah ku riday Cabdullaahi Aasad oo ka tirsanaa Ciidamada Jubbaland,isla markaana horay u dilay Xaaskiisa. Goobta uu xukunka ka dhacayay ayaa waxaa ehelada qaar kamid ah gabadha xaaskiisa aheyd ee uu dilay xilli habeen ah. Cabdullaahi Asad wuxuu katirsanaa Ciidamada […]
Guddoomiye Cawad oo loo diiday Garoonka Diyaaradaha
Gudoomiye ku xigeenka Labaad ee Golaha Shacabka Mahad Cabdalla Cawad ayaa loo diiday in uu galo garoonka Diyaaradaha Aadan cadde ee Magaalada Muqdisho. Ciidamo ka tirsan howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa u diiday in uu garoonka ka dhaafo Guddoomiye Cawad iyo Wafdigiisa oo dalka dibadiisa u socday. Waxaa uu sheegay in uu ka baaqday […]
Rajada dalalka Afrikaanka ayaan fiicnayn Waddankii 5aad ee ka mid ah dalalaka qaaradda Afrika uga qayb galaya koobka adduunka, Senegal, ayaa caawa cayaartiisa ugu horraysa la yeelanaya kooxda Poland oo ay ku wada jiraan guruubka A. Masar oo hore looga soo badiyey waxay cayaarteedi labaad la yeelan doontaa Ruushka oo dalkiisa lagu cayaarayo. Waxaan qormadan […]
Rowdo waxay xeryaha qaxootiga kala soo noqotay mihnad ay macaash ku samayso Rowdo Axmed Biixi waxay caruurnimadeedii iyada iyo waalidkeed ka qaxeen magaalada Kismaayo, iyagoo ku biiray qoxootiga ku jira xeryaha Kenya, balse sannadkii la soo dhaafay ayay dib ugu laabatay Kismaayo si iskeed ah iyadoo wadata afar ilmood, lehna xirfad ay ku shaqaysan karto. […]
Madaxweyne Farmaajo oo Addis-Ababa uga qeyb galaya shir aan caadi ahayn
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 21-ka bishan Magaaladda Addis-ababa uga qeyb galaya shir aan caadi ahayn oo madaxda waddamada IGAD ay isugu imaanayaan. Wararka aan heleyno ayaa sheegaya in casuumaaddii shirka ay soo gaartay Madaxweynaha Soomaaliya, waxaana la filayaa in wafdi uu hoggaaminayo Madaxweyne Farmaajo ay gaaraan Addis-ababa 21 bisha. Shirkan […]
Wiil u eg Pogba oo kaalintiisa galay
Efeme Temienor (midig) oo sawir iska qaaday isagoo la taagan Paul Pogba Wiil dhigta fasalka lixaad ee dugsiga sare ee iskuul ku yaalla koofurta London ayaa loo adeegsaday in uu beddelo xiddiga reer Faransa ee Paul Pogba. Efeme Temienor waxay hore ugu sheegeen saaxiibadiis iyo qoyskiisaba inuu aad ugu eg yahay cayaartoyga. Laakin isu ekaanshahaas […]
Sawirka Cali Cumar Adeer Nin Soomaali ah ayaa lagu riday xukun 15 sano oo xarig ah ka dib markii uu ka qayb qaatay dhacdo magaalada Muqdishu lagu afduubtay wariye u dhashay dalka Canada, sida ay ku warramayaan wabaahinta dalkaasi. Cali Cumar Adeer oo 40 jir ah ayaa bishii Disembar lagu soo oogay dambi ah inuu […]
Askari Muqdisho ku toogtay Askari kale
Askari ka tirsan ciidamada Nabad suggida ayaa maanta Magaalada Muqdisho waxaa uu ku dilay Askari ka tirsanaa Ciidamada Ilaalada Wadooyinka. Dilkaan ayaa ka dhacay degmada Hodon, waxaana la dilay Askariga xilli uu ku howlanaa kala hagida Gawaarida Wadada Mareysa. Ciidamada Ammaanka ayaa soo gaaray goobta uu dilku ka dhacay, waxaana ay gacanta ku dhigeen Askarigii […]
Siyaasiga Salaad Cali Jeelle Tallaabadii Labaad Oo Aan Ugu Guuleysan Laheyn Kenya Ayaa La Qaaday
Shalay oo Isniin ah ayaa Wakiilo ka socda Dowladda Soomaaliya waxa ay jawaabta dacwada dhanka muranka badda ah ee Kenya kala dhaxeeysa waxa ay u gudbiyeen Maxkamada Cadaalada Aduunka ee dalka Holand. Dad badan ayaa rajo wanagsan ka muujiyey in dacwadaas ay Soomaaliya ku guuleysan doonto,waxana ka mid ah Siyaasiga Salaad Cali Jeelle. Siyaasiga oo […]
1 2 … 1,442 →